चिनियाँ राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गर्ने : द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार होला ? : नेपालमाला
काठमाडौं : दुई देशको बीचमा तनाव साम्य भए लगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिने सि भारत आउने छन् ।
यो वर्ष सम्मेलन गर्ने पालो भारतको हो र यसमा चीनले सहमति जनाइसकेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सो सम्मेलन आयोजना गर्न भारतलाई सहयोग गर्ने र जारी सिमा विवादले असर नगर्ने उल्लेख गरेको छ । यस अगाडि सन् २०१६ मा भारतले ब्रिक्स सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
पूर्ववत अवस्थामा फर्केला सम्बन्ध ?
भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा झण्डै एक वर्षदेखि जारी तनाव पछिल्लो दुई साता यता कम हुँदै गइरहेको छ । सहमति अनुसार दुवै मुलुकले पान्गो त्सो तालबाट आफ्ना सेनालाई केही पछाडि हटाएका छन् र अन्य केही सेना पछि हट्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दुई मुलुकको सम्बन्ध अब सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख हुनेछ ।
विगत १ वर्षदेखि गलवान उत्यकामा दुई देशका सेना आमन(सामने भए जसको भूराजनीतिक तरंग यस क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन, विश्वभर नै रह्यो । विश्लेषकहरुले अब तत्कालै दुई मुलुकको बीचमा द्वन्द्वको सम्भावना नरहेको र दीर्घकालीन रुपमा नै समस्या समाधान गर्न तयारी अगाडि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् ।